Chloramphenicol Powder, Dl Chloramphenicol, Theophylline Anhydrous-Runquankang
Jiangxi runquankang technology technology co., Ltd.kuyinto yokuxuba izinto ekrwada imveliso manufcaturer.The mveliso ibekwe epakini mveliso kwidolophu Guantian, Chongyi okwilizwe, Ganzhou komzi. Inkampani ibhalise imali eyi-yuan yezigidi ezingama-50, egubungela indawo ye-8,000 yeemitha zesikwere, kwaye inabasebenzi abangama-99
Inkampani inokhuphiswano olomeleleyo kwiimarike zasekhaya nakwamanye amazwe ngokuveliswa kwemveliso ekrwada yekloramphenicol, i-DL chloramphenicol, i-heparin sodium kunye ne-sweetener sodium saccharin.
Ngesiseko ezintsha ezimeleyo, anqiang ubukrelekrele usebenza ngokusondeleyo kunye neeyunivesithi zasekhaya kunye namaziko ophando lwenzululwazi ukwazisa technology ulawulo motion phambili evela phesheya ngokuqhubekayo ukuphuhlisa
192021 / UCanzibe
Isodium saccharin luhlobo oluqinileyo lobugcisa ...
Isodium saccharin luhlobo olomeleleyo lwe-sweetener saccharin. I-Saccharin ayinasondlo kwaye isetyenziselwa ukongeza ubumnandi kwiziselo kunye nokutya ngaphandle kweekhalori okanye iziphumo eziyingozi zokutya iswekile. Sebenzisa iilekese zokufakelwa kunokukunceda ukunciphisa ukusetyenziswa kweswekile. Ephakamileyo ...
Isodium Saccharin Anhydrous
Isodium Saccharin Anhydrous Sodium saccharin, ekwabizwa ngokuba yi-saccharin enyibilikayo, yityuwa yesodium ye-saccharin, enamanzi amabini akhazimlayo, iikristale ezingenambala okanye umgubo omhlophe omhlophe wekristale, ngokubanzi unamanzi amabini e-crystal, kulula ukulahlekelwa ngamanzi e-crystal ukuze abe yi-saccharin engenamanzi, w ...
I-Jiangxi Runquankang Biological Technology Co, Ltd.